CANAB "MUSCAT NOVOSHAKHTINSKY": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA IYO TALOOYINKA BEERAHA IYO DARYEELKA - BEERTA
Iskudhafka hiwaayadda leh caramel caramel - Canab Novoshtinsky canab
Waxay muddo dheer noqotey noocyo caadi ah oo canab ah, laga helo xulasho xirfad leh.
Ma aha oo kaliya tayada tayada sare ee miraha iyo xasiloonida korodhka, laakiin sidoo kale si wanaagsan u miro dhaliya si joogto ah.
Mid ka mid ah noocyada noocaas ah waa Muscat Novoshakhtinsky.
Muscat Novoshakhtinsky waa qaabka qolka qolka cuntada ee canab casaan. Kala duwanaan hore u bislaaday, ubax is-iskudhafay (bisexual).
Bacriminta sidoo kale waxaa ku jira Aladdin, Korolek iyo Valeriy Voevoda.
Cancat Novoshakhtinsky canab: sharaxaad kala duwan
Berry waxaa lagu gartaa size weyn, qaabka wareegsan ee midab casaan-guduud ah oo miisaankeedu yahay ilaa 12 garaam.
Novoshakhtinsky waxaa lagu sharraxay hilib casiir ah oo casiir leh, daboolay rinjiga khafiifka ah, taas oo aan la dareemin marka la wada baabbi'iyey oo aan u jilicsanayn.
Dhadhanka berry - nutmeg leh caramel caramel dheer, taas oo aan lumay haddii midhaha waxaa lagu kaydiyaa waqti dheer on duurka.
Noocyada noocan oo kale ah sida Ruta, Nisin iyo Nesvetaya Gift kala duwanaan dhadhan gaar ah.
Marka lagu daro dhadhan wanaagsan iyo caraf udgoon, berry wuxuu leeyahay awood sare oo loogu talagalay sumoobidda sonkorta. Canab waa ku fiican yahay gaadiidka, berry ma aha oo kaliya ma lumiso dhadhanka, laakiin sidoo kale si fiican u hayn qaabka.
Marcelo, Delight Muscat iyo Long-awaited waxay ku faani karaan sonkor badan.
Vine soo baxay si aad u wanaagsan, waayo dhererka oo dhan ee biqil. Daqliga duurka ee Novoshakhtowsky Muscat waa in lagu beeraa si ballaaran - fogaan ah 4-5 mitir, si loo oggolaado labada caleemo iyo xididada inay koraan.
Gooynta canabkuna si wanaagsan oo xididada u samee geedo, kuwaas oo si firfircoon u bilaabaya inay midho u dhalaan.
Canab Sawir "Muscat Novoshakhtinsky" hoosta eeg:
Canab waxaa la helay iyagoo gudbinaya labo nooc - XVII-10-26 iyo Talisman (Kesha). Breeder - EG Pavlovsky, Russia.
Gacanta qun-ka-qaadka ayaa ka mid ah Ayut Pavlovsky, Korolek iyo Super Extra.
Qeexitaan iyo talooyin ku saabsan daryeelka
Beeladani waa mid muhiim u ah rikoodhka hore ee Bisaylkiisa - xilliga soo kordhaya ee ka soo baxa ubaxyada ilaa bacrinimo buuxda ee berry wuxuu u dhexeeyaa 100 ilaa 105 maalmood, kaas oo u oggolaanaya inuu gebi ahaanba gooyo miraha isla markaana uu dhadhamiyo bartamaha August.
Rucub canab ah waa mid aad u ballaaran, waxay ku gaari karaan miisaan illaa 800 garaam, cufnaanta dhexdhexaad ah, xarrago, qaab muuqaal ah - cilidroconi.
Anthony The Great, Ataman iyo Lily ee Dooxada waxay ku faani kartaa kooxo isku mid ah.
Cabsila'aan, waxaad hal kaneeco ku dari kartaa indhaha qiyaas ahaan 30 ilaa 35 gogo '.
Gooyo cusub oo lagu magacaabo "Novoshahtinsky nutmeg" waxaa lagu sameeyaa khudradda 6-8. Xeryahanadu waxay bilaabaan inay si dhakhso ah u dhali karaan, horey sannadka labaad ka dib markii laga beerto seedling meel joogto ah.
Wax soo saarku wuu sarreeyaa sababtoo ah caleemaha fara badan ee badan iyo geedo adag, iyo miraha muddo dheer waxay noqon kartaa geedka canabka ah oo aan lumin badeecadooda iyo dhadhanka.
Haddii aad haysato xayawaan aad u sarreeya (Bacriminta iyo bacriminta isku dheeli tiran Bacriminta macdanta ah, diirinta dalagga iyo waraabinta wakhtigeeda), markaa waxaad ku guuleysan kartaa qiyaasta rikoodhada canabka iyo mugga dalagga.
Kala duwan waa baraf u adkaysta, miro miro ayaa ku haya heerkul-ilaa heer-is-gaadhsiisa. Muuqaalkan, oo ay weheliso xilligii Bilihii hore, waxay suurtogal u tahay in ay koraan noocyada noocan ah ee bartamaha.
Noocyada noocaas ah sida Svetlana, Beauty of North iyo Pink Flamingo si fiican u dulqaadan by qabow.
Canabku waxay ku cadeeyeen gobollada koonfurta iyo waqooyiga sababtoo ah waxay iska caabinayaan cimilada aan xasilloonayn, laakiin xilliga jiilaalka waxay u baahan yihiin hoy ku ah khasab, gaar ahaan marka ay timaado geedo yar yar.
Cadaadiska nuduga Novoshakhtinsky si cudurada waa celcelis - 3 dhibcood. Tani waxay khuseysaa gaar ahaan caarada yaryar (xiir) iyo xayrta budada ah (oidium).
Kobcinta canab si ay u taageeraan iyo u diidmada geedka canabka ah ee dalagga iyo caleemaha waxay abuuraan nidaam hawleedka lagama maarmaanka ah, taas oo yaraynaysa cudurrada dhirta. Gooyadu waa qalabka ugu muhiimsan ee xakameynaya culeyska geedka iyo yaraynta qaybaha ay arrintu saameysey ee geedka canabka ah.
Beelaha aan waxyeello u geysan dharka, laakiin waxaa lagu dhufan karaa caarada caarada leh, jiilaalka kaas oo ka dhacaya jilif caleen ah.
Cayayaanka Tani waxay dhaawici doontaa caleen sabiib ah, taas oo horseedi karta hoos u dhac ku yimaada sonkorta oo ah nooca berry, koritaanka gaaban ee caleemaha iyo hoos u dhaca dhalidda. Habka saxda ah ee halganka waa in la nadiifiyo lana baabi'iyo jilifkii hore iyo qaybaha ay saameysay ee baadiyaha.
Kala saarida dhirta leh ujeedo ka hortag ah waxay kaa caawineysaa ilaalinta canabta cayayaanka iyo cudurrada waa in si joogto ah loo hirgeliyo ka hor inta ubax iyo wakhtiga abuurista miraha bilaabmaa.
Hase-yeeshe, waxaa jira dad badan oo hargab doofaar ah oo aan la garaneynin Muscat Novoshakhtinsky, haddana waa qaab-dhismeed hybrid ah ee loo yaqaan 'viniculture', oo leh heer sare oo dhalid ah, caabbinta cimilada la beddeli karo, iyo miro waaweyn oo leh caramel-nutmeg flavor.
Gacaliye qaali ah! Ka tag faallooyinkaaga ku saabsan noocyada kala duwan ee canabka Muscat Novoshakhtinsky ee faallooyinka hoos ku qoran.